HANUKEII यो स्वतन्त्र छ
हामी हामी बाँचिरहेका छौं र हामी बाँचेका छौं। Hanukeii यो वर्णन गर्न केहि गाह्रो छ तर बुझ्नु सजिलो छ यदि तपाईंलाई यो लाग्छ भने। यो एक अवर्णनीय भावना हो, जसले तपाईंलाई त्यो ठिक समयमा सास बनाउँदछ, जसमा तपाई अन्ततः सचेत हुनुहुन्छ कि तपाईको चिन्ता पछाडि छोडियो र तपाईले राम्रो समयको आनन्द लिई खुशी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईं त्यो भावना सम्झनुहुन्छ जुन तपाईंसँग हरेक पटक पहिलो पटक केही अनुभव गर्नुहुन्छ?
जस्तो कि, लामो यात्रा पछि, तपाईं कार विन्डो तल रोल र हावा भित्र, तपाईं विन्डो को किनारमा झुकाव र नुनको गन्ध गन्ध गर्न थाल्नुहुन्छ, हामीलाई खुशी र उत्तेजनाले भरिएको समुद्रको त्यो गन्ध। । यो समुद्रले तपाईंलाई स्वागत गर्दै, यो घोषणा गर्दै कि तपाईं त्यसमा पुग्नै लाग्दै हुनुहुन्छ।
वा त्यो अनौंठो क्षण, जहाँ तपाईं समुद्री किनारको किनारमा पुग्नुभयो, तपाईं ना bare्गो खुट्टामा रहनुहुन्छ र महसुस गर्नुहुन्छ कि नरम बालुवा, तपाईंको खुट्टाहरूलाई ढाक्न थाल्छ, हरेक चोटि समुद्र आउँदा तपाईंको खुट्टाको खुट्टा सफा गर्छ, यसको लागि जान्छ, तपाईंको खुट्टा सफा गर्दै बारम्बार, ताकि तपाई हल्का हुनुहुनेछ, र तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईको दैनिक जीवन अहिलेको लागि रोकिनेछ।
समुद्रको हावाले तपाईलाई दिन्छ भन्ने अनुभूति नै हो जुन हथेलीको पातहरूको बीचमा घुम्दछ, तपाईको कपाललाई कंघी गर्दछ, यसले नयाँ स्ट्रोक सिर्जना गर्दछ, र जसले तपाईको अनुहारमा चिन्ता गर्दछ, पानीमा आफूलाई डुबाउन प्रोत्साहित गर्दछ र जीवनको अनुभव गर्दछ। , जुन सटीक क्षण हो, त्यो हो Hanukeii.
एक खुला जीवन
Hanukeii यो शान्ति हो
Hanukeii यो सूर्यास्तको सुन्तला रंग हो जुन शान्त समुद्रमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। यो समुद्री तटबाट हेरेर तपाईले महसुस गरेको शान्ति पनि हो।
Hanukeii यो तपाईको छेउमा भत्केको छालहरूले परिवर्तन गरेको मौन हो।
Hanukeii यो "dolce far niente" को सार हो, यो केहि नगर्नुको खुशी हो। यो अवलोकन गर्नु हो कि सूर्य कसरी बिस्तारै बढ्दै जान्छ, आकाशको सब भन्दा उचाइमा पुग्छ, र पछि कसरी उदायो त्यसरी नै फेरि तल आउँछ।
जब सरलता पूर्ण हुन्छ, जब हतार, अत्याधिकता र तनाव समानान्तर वास्तविकतासँग सम्बन्धित देखिन्छ। त्यो हो Hanukeii.
यो रातमा घरको पैदल यात्रा हो, समुद्रलाई विवेकपूर्ण रूपमा चन्द्रमा द्वारा प्रबुद्ध गर्दै। Hanukeii यो समय छ भनेर थाहा पाउँदै जागेको भावना हो। बिहानको खाजामा, किनारको साथ भाग्न, अलि बढी निदाउनको लागि।
पानी छाने पछि छाता मुनिको समुद्री तटमा यो झोला हो, यो छालामा ट्यानको छेउमा सेतो बिकिनी रेखा हो; Hanukeii यो दिउँसोको निष्कपट, रमाईलो र शान्त वार्ता हो।
Hanukeii सबै भन्दा पछि, के सबै भन्दा पछि खोजिएको हो: Hanukeii यो शान्तिको क्षण हो।
हामी बेसी महसुस गर्छौं
Hanukeii यो दिनचर्यासँग ब्रेक हो।
यो त्यो क्षण हो जसमा डामर बालुवामा परिणत हुन्छ, कारहरू डु boats्गामा, झोला सर्फबोर्डमा र हिलहरू स्याण्डलमा।
यो हवाईजहाजमा चढ्नु अघिको क्षण हो, यो रेलमा यात्रा हो, यो कार विन्डोको माध्यमबाट सडकमा हेर्दैछ जब तपाईं समुद्री देख्ने क्षण कल्पना गर्नुहुन्छ, क्षितिजको केही दूरीमा, धमिलो। यो जानेको लागि थोरै छ भनेर थाहा पाउँदा यो उत्साहको भावना हो। यो उमसबाट अन्तमा खडा रहेको कपाल हो। यो वास्तविकता हो जब यो अपेक्षाहरू भन्दा बढी छ।
Hanukeii यो गायब हुने समय हो। ती घण्टा वाष्पीकरण हुन् र घडी ड्रयरमा बिर्सिए। Hanukeii यो संसारमा सबै समय हुँदैछ, यो हरेक मिनेट, हरेक क्षणको स्वामित्वमा छ र शान्त वातावरणमा यसको फाइदा लिदै छ।
यो दिन अन्त्य हुन चाहिरहेको होइन, एक हजार योजनाहरू बनाउँदै, यसले तपाईंको कुन समय सुत्न जान्छ त्यसले फरक पार्दैन। Hanukeii सूर्योदय हेर्न सुत्न सक्षम भइरहेको छ।
Hanukeii यो समुद्र तट, सूर्य र बालुवाको बिटर्सवीट मेमोरी पनि हो जुन जुत्ताको बीच-बीचमा समय-समयमा देखा पर्दछ, घर फर्केर केही हप्ता पछि पनि।